Xarunta Adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah waxaa ka go'an soo kabashada Dalxiiska Haiti
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Haiti » Xarunta Adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah waxaa ka go'an soo kabashada Dalxiiska Haiti
Wararka Haiti • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Taageerada ka soo kabashada dalxiiska Haiti
Kulankii ugu horreeyey ee maanta la qabtay, xubno ka tirsan hawl-wadeennada heer sare ee adkeysiga Dalxiiska, Soo-kabashada iyo Joogtaynta ayaa ballan-qaaday taageero buuxda si ay gargaar ugu fidiyaan Haiti oo dhul-gariirku ku dhuftay. Wasiirka Dalxiiska ahna aasaasaha Xarunta Adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka (GTRCMC), Mudane. Edmund Bartlett, ayaa sheegay in tallaabadani ay adkeyneyso ballanqaadkii ahaa in la dardargeliyo soo kabashada iyo adkeysiga badeecada dalxiiska ee Haiti.
Kulanka, waxaa lagu falanqeeyey qaar ka mid ah baahiyaha degdegga ah ee dadka Haiti iyo tan ugu muhiimsan abuurista shax si ay u taageeraan ururinta iyo qaybinta alaabtan.
Hawl -wadeenku wuxuu sharraxay tallaabooyinka xiga oo ay ku jiraan GTRCMC oo isku -dubbaridaysa dhammaan qaybaha dadaallada soo -kabashada.
GTRCMC waxay kaloo la shaqayn doontaa daneeyayaasha dalxiiska caalamka si ay u taageeraan Haiti.
“Waxaan ku faraxsanahay in isku-dhafka waayo-aragnimada iyo waayo-aragnimada ee hawl-wadeennada heerka sare ay awoodi doonaan inay bilaabaan inay dejiyaan nidaamyada iyo hababka loo baahan yahay si loo caawiyo dadka Haiti si ay u bilaabaan waddada ay ku soo kabanayaan. Kulanka maanta, waxaan awoodnay inaan ka wada hadalno qaar ka mid ah baahiyaha degdegga ah ee dadka Haiti iyo tan ugu muhiimsan abuurista shax si ay u taageeraan ururinta iyo qaybinta alaabtan, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett.
Hawl -wadeenku wuxuu sharraxay tillaabooyinka xiga oo ay ku jiraan Adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka oo isku dubarida dhammaan qaybaha dadaallada soo -kabashada; la shaqaynta daneeyayaasha dalxiiska caalamka si ay taageero Haiti; samaynta guddi -hoosaadyo wax ka qabta dhinacyada kala duwan ee soo -kabashada dalxiiska; bixinta taageero farsamo iyo saadka.
“Runtii aad baan ugu faraxsanahay taageerada baaxadda leh ee ay siinayaan xubnaha hawl -wadeennada. Waxaan dareemeynaa ruux qaraabo leh Haiti oo la siiyay u dhawaanshahayaga. Waxaan ka mid nahay juqraafigaas oo dhan maxaa yeelay waxa saameeya iyaga ayaa na saameeya annagana, ”ayuu raaciyay Wasiir Bartlett.
Kooxda hawsha ayaa sidoo kale isku raacday inay jiri doonto isku -duwidda isgaarsiinta; la socodka iyo qiimaynta; abaabulka iyo maaraynta kheyraadka; iyo adkeysiga dalxiiska.
Mudane LK Cassandra Francois, Wasiirka Dalxiiska ee Haiti, ayaa u mahadceliyay dhammaan xubnaha hawsha, wuxuuna yiri, "Waxaan aad u bogaadinayaa sida ay uga go'an tahay caawinta Haiti iyo iskaashigan, waddanku si dhaqso leh ayuu uga soo kaban doonaa musiibadan."
In la muujiyo muhiimadda ay leedahay Dib u soo kabashada dalxiiska ee Haiti, Agaasimaha Fulinta ee GTRCMC ayaa yiri, “Covid wuxuu muujiyey qiimaha wax -ku -oolka ah ee dalxiiska ee dhaqaalaha dal, sidaa darteed soo -kabashada dalxiiska ee Haiti waxay muhiim u tahay mustaqbalka Haiti, waana inaan si dhaqso leh wax uga qabannaa.”
Taskforce, oo loo qorsheeyay inay mar kale kulmaan toddobaadka soo socda, ayaa ku daray Madaxweyne ku-xigeenka Caribbean Hotel and Association Tourist Association (CHTA), Nicola Madden-Grieg iyo maal-galiyaha caalamiga ah iyo ganacsadaha, Morten Lund.